Fandosiran’i Arfa Houcine Yerres : Mpiandry fonja telo atao fanadihadiana -
AccueilRaharaham-pirenenaFandosiran’i Arfa Houcine Yerres : Mpiandry fonja telo atao fanadihadiana
Notànana teny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy i Arfa Houcine Yerres, ny faha-23 Jona 2017, taorian’ny fanolorana azy teo anoloan’ny Fampanovana ary heloka be vava maro no vesatra nanenjehana azy tamin’izany, toa ny fitànana fitaovam-piadiana mahery vaika, fikasana haka an-keriny, fikambanan-jiolahy ary fisandohana andraikitra, sns.
Atao fanadihadiana eny anivon’ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao ireo mpiandry fonja telo niara-dalana farany tamin’i Arfa Houcine Yerres ny datin’ny 28 Desambra 2017, andro nandosirany ka tsy nahitàna azy intsony. Be loatra mantsy ny ahiahy manodidina ny fomba nandosiran’ity teratany marokana mizaka ny zom-pirenena frantsay ity. Fantatra koa mantsy fa ora efatra taorian’ny nandosirany vao nahazo fampandrenesana ny mpitandro filaminana (tany amin’ny 9 alina tany ho any ny datin’ny 28 Desambra 2017). Voalaza mantsy fa nivezivezy nitsabo tena teny amin’ny HJRA hatrany ity teratany vahiny ity. Toa hoe tsy vita teny amin’ny HJRA anefa izany fitsaboana izany ka nasain’ny mpitsabo nankeny amin’ny Polyclinique Ilafy ny andron’ny 28 Desambra.
Fanontaniana maromaro no mipetraka manodidina izao fandosiran’i Arfa Houcine Yerres izao: tamin’ny fomba ahoana no nahazoany ilay famindran-toerana avy teny Tsiafahy nankeny Antanimora? Tsy misy ifandraisany ve ny fandefasana azy teny amin’ny Polyclinique Ilafy sy ny fandosirany? Voalaza mantsy fa nisy nisakana teny amin’ny manodidina an’Ambohitrarahaba teny ilay taxi nitondran’ireo mpiandry fonja azy. Nahoana no ora efatra taorian’ny fandosirana (amin’ny sivy ora alina) vao nahazo fampandrenesana ny mpitandro filaminana? Nahazo alàlana avy amin’ny lehiben’ny fonja ve ireto mpiandry fonja telo ireto nihazo ny Polyclinique? Iza avy no nanampy azy tamin’izao fandosirana izao (efa any am-pitandranomasina ny tenany ankehitriny)?
Isan’ireo nitaky ny fampidirana am-ponja an’i Claudine mantsy ny sendikan’ny mpiandry fonja kanefa mahavariana ihany izany manoloana izao zava-mitranga izao, ny efa teo am-pelatanana indray aza no votsotra tamin’ny fomba tsy mazava amin’izay indray olona nahiana ho niketrika heloka be vava!
Efa nambara teto fa tsy manana olona hitondra firenena i Andry Rajoelina, porofon’izany tsy misy afa-tsy Christine Razanamahasoa sy Augustin Andriamananoro no hany olona eo am-pelatanany dia izao nanangana toby fitaizana be antitra na “hospice” ...Tohiny